中文 Rosiana Español
Organic zezika Production-dalana,
Iombonana amin'ny zezika Production-dalana,
Hydraulic zezika Turner
Disc zezika Granulator
Rotary Drum fanamainana
Fehin-kibo Conveyor System dia tena ilaina anjara amin'ny famokarana zezika rehetra tsipika. Tsy tia manome mpanjifa amin'ny fehikibo conveyor sy ny fironana avo-zoro conveyor fehikibo. Ny tia tena zezika conveyor mampifandray fitaovana miaraka, ka ho mora kokoa akora & vita entana fitaterana. Mizara tsara ny zavatra conveyors dia ampiasaina amin'ny mihena Atongilano sy ny fangatahana mba hamela ny zezika mba ho voangony raha mifindra eo amin'ny gorodona na stacked conveyor. Ary mamonjy asa, ny fotoana sy hery, amin'ny tarehin-tsoratra ny avo fahombiazana & mora fandidiana. Tia conveyor no be mpampiasa tsy amin'ny zezika organika & iombonana amin'ny famokarana, fa amin'ny hazo & fahana bala pamokarana, izay Adjustable araka ny mpanjifa fangatahana. Ny ara-nofo dia afaka ho ao an-Hopper ny conveyor. Zavatra tsy fihinanana Hopper manana fingotra-fanakatonana takelaka hampihenana ny fananana very. Rehefa antitra, ireto takelaka ireto mora esorina. Ny tia fehikibo conveyor dia miorina mafy ny voatetika Stainless vy. Ny toe misy ny fizarana izay Nivoaka faingana miaraka. Ny fitaterana fehikibo ao mafana hamidy.
Previous: Zezika fonosana Machine
Fehin-kibo Sakany (MG) Fehikibo Length (m) / Power (KW) Fehin-kibo Speed ​​(m / s) Fahafahana (T / h)
Fanamarihana: tena fahefana dia nanapa-kevitra ny hametraka manontolo
1. Compact famolavolana, mety ho voa, vovoka na ny zezika vokatra.
Fehin-kibo conveyor dia ahitana rollers sy mikatona conveyor fehin-kibo. Misy roa rollers iray ihany no ho an'ny mitondra fiara conveyor miodina iray hafa dia noho ny fanovana ny maotera fitarihan'ny conveyor. Head-roller no drived ny moto conveyor dia draged an-keriny ny friction izay niteraka avy lohany sy ny conveyor-roller. Head-roller Matetika no napetraka ao amin'ny fanatanterahana farany mba hampitombo vahana ho tsara kokoa mitaritarika. Material dia sakafo avy amin'ny fahana farany, ary latsaka ny miodina sy ny fehin-kibo conveyor afaka conveyor fanaterana ny farany.
Zezika fonosana Machine
No. 58 Xinjinqiao Road, Pudong, Shanghai, Shina